Beekumsa hadiisota adda addaa pdf. Qabsoo Oromoo fi Siyaasa Oromiyaa
Gukora 15.12.2020	15.12.2020 Beekumsa hadiisota adda addaa pdf
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. Disclaimer: All views expressed on this site are opinion of authors and ayyaantuu is not responsible for the content.
Sign in. Log into your account. Password recovery. Afaan Oromoo. Moomummaan Cehumsaa Oromiyaa Maaliif Barbaachisa? Admin - October 10, 0. Falmataa - October 9, 0.
Falmataa - September 28, 0.
Haala yeroo irratti marii Prof. Asaffaa Jaalataa fi Prof. Asfaw Bayyanaa Admin - August 9, 0. Hassan shatters European 10,m record with Admin - October 8, 1.
Our family is saddened by the passing away of a great person, Legesse Tessema Admin - October 7, 0. Our family is saddened by the passing away of a great person, Legesse Tessema We have lost one of the most impactful pillars on October Abiy Ahmed Abyot Kahsay?
Cultural and political lies have always beenOromoon nyaata heedduu qaba.
Leave request workflow in sharepoint designer 2013
Jalqaba nyaata ykn dhangaa kanan tarreessa. As jalatti kan ramadaman nyaata ija midhaaniirraa hojjetaman kan akka biddeenii, caabetaa, marqaa, mooqa, daabboo,maxinoo, cuukkoo, nuugii, saliixii, fi kkf faa dha. Cuukkoo, fi caccabsaan garbuu ykn qamadii irraa hojjetamu. Sana booda ni daaku. Erga daakanii booda dhadhaadhaan sukkuumu. Soogiddi illee caccabsaatti baayyinaan dabalama. Nyaata gabbinaa Proteins : warri kun foon, lukkuu,hanqaabuu buphaaqurxummii, haannan, itittuu, baaqilaa, akurii atarii, fi kan biroo irraa argamu.
Hub: gara fuulduraatti qorannee barreessina.
Faayi warra akka warqee harkaa, mormaa, gurraa,fi hanbaarrii, hanbaarrii ka biroo, faaya mataa, fi faayyi mormaa hedduun ni jiru. Uffata Dhiiraa: qumxaa, kittaa, kofoo, bolaalee ykn surree,kootii, marxoo, surrii, naxalaa, fooxaa, faaya, fi kkf. Hub: gara fuul duraatti ballinaan ibsama. Oromoon mana muka, dhagaa, sibiila, qorqorroo, citaa, simminttoo, dhoqqee fi kkf irraa hojjechuun keessa jiraata.
Dinagdeen haala manneetii Oromoon keessa jiraatanii haalaan murteessee jira. Kun gara fuulduraatti yeroo mootummaan Oromoo dhugaa tokko dhaabbatu haalaan irratti hojjechuu kan feesisu ke.Mangistuu Asaffaa Daadhii tiin. Qabsoon bifa adda addaa qaba. Jiruudhaan itti fufuuf diina ficcisuun amaluma uumaati survival instinct. Jiruun hawaasaa ammoo fedhii fi qabeenya walitti nama buusaniin bones of contention kan guutameedha.
Isaanis, qabeenya fi aangoo siyaasaa dabalatee waan baayyee dha. Sabni hunduu kana keessa darba, kana keessa jiraata. S eenaan akkuma himu qabsoon hin dhaabatu. Sabni qabsoo dhaabu hin jiraatu. Garuu qabsoon bifa jijjiirata, tooftaa haaraa mijeeffata. Walumaa galatti Qabsoon hin dhaabatu, bifuma jijjiirata. Waggoota shantamman darban keessatti garuu kaayyoon qabsoo saba Oromoo garbummaa ofirraa kaasuun hiree biyya Itiyoophiyaa keessatti seenaa fi siyaasaan qabu sadarkaa guddaa irraan gahuu kaayyeffatee finiinaa ture.
Itti fayyadamni siyaasdinagdee firii qabsoo keenyaas guutummaatti hirmaanneerra jedhanii afaan guutatanii dubbachuun nama dhiba. Waggoota dheeraaf Oromoon siyaasa Itiyoophiyaa keessatti fincila Farra Cunqursaa fi tiksa aadaa, seenaa fi duudhaa isaa irratti hirmaatee ture.
Yeroo keenya baayyes kanarratti dabarsine. Qabsoo kana eenyutu eegale?
Akkamitti eegalan? Maal kaayyeffatan? Firii isaa eenyutu qooddate? Fuulduree qabsop kanaaf hoo furmaata fi yaada qabsoo waaraa irratti akkamiin hojjetamaa jira What are the prospects, trends and roadmaps being built for sustainable enrichment and fostering the advance OROMO cause? Jibba walirratti akka kuufannu nu taasisa.
Haalonni fi taateewwan akkasii kanaan duras akka ture ni beekna. Baayyee nama gaddisiisa. Gatiin kanaan dura yeroo diinaan lollu baafne gumaan isaa bilisummaa fi badhaadhina dhaloota hafeeti. Itti Gaaffatamaan Eenyu? Akka waliigalaatti balleessaan kanaa warruma qabsoo Oromoo geggeessina jedhuu dha.Dhumni jaaraa 18 ffaa fi jalqabni jaaraa 19ffaa seenaa Oromoo keessatti jalqaba bara haarayaati. Yeroo kanatti jireenyi Oromoo jijjiirama sirnaa keessa tur.
Oromiyaa noannoo tokko tokko keessatti Abbaan Duulaa of qolaan kalaafataan argamuun dhaloota sirna Abbaa lafaatiif karaa bane. Yeroo kanatti — dhuma jaaraa 19ffaa koloniyaalistoonni Awropaa Afrikaa hirmaachuuf bololaa turan. Akka kanaan Ingliiziin Yohannis mooti Tigree ofitti qabe. Qabeenyaa fi human namaa inni biyyoota kolonii taasifate keessa saame kun akka inni Yohaanis faa irra aanee, Habashaa tokko taasisee, mootii moototaa of moggaasu isa dandeessise.
Gabaabatti waliif galteen koloniyaalismii Tophiyaa fi Imperiyalismii biyya lafaa giddu jiru yeroo kanatti jalqabame. Qandaalota Oromoo keessaa warri akka Goobanaa tooftaa dhartaa kan federeeshanii Oromiyaatii fi Habashaa dhaabna jechuun irratti minilikiin gawwomfamanii isaan wajjiin dhaabbatan iyyuu kanuma Amaari booda irratti gane. Injifatamuun Oromoo dhugumaan hawaasa Habashaa keessatti illee hundee fiyudalismii cimse.
Kanaaf, hamma koloneeffatummaan kun diigamee, saboonnii [ deleted ] bilisoomanitti bilisummaan ummata faana mootummaa Tophiyaa jala jiranii hundumaa hin mirkanaahu. Sabni Oromoo guyyaa kolonii Amaaraa keessatti kufee jalqabee sirna saaminsaa fiyudalismii fi Imperiyaalismii of irraa dabruuf waldhaansoo adeemsisaa jira. Waldhaansoo kanneen, keessa warra ciccimoo tokko tokko maqaa dhoofna. C Moohamuu Xaalliyaani booda, Ormoonni Finfinnee fi Haragee mootummaan birmaduu Oromoo tokko akka dhaabamuuf, mootumma Inglizii gaafatan.
Mootummaan Ingilzii ammoo gafii kana dhagahuu didee Hayle-Sillaasee mootummaa irratti deebise. Yeroo kanatti yaada Hayle-Sillaasee deebisuu kanaan mormuudhaaf jagnootiin Oromoo guumaa, Limmuu fi Iluu-Abbaaboor fincila guddaa godhan. Booda mootummaan magantaa waan jalqabeef, haalli biyya lafaa waan jijjiirameef, waldaan Macaa fi Tuulamaa waan dhoowwaameef, keessattuu warraaqsi Oromoo rakkina poltiikaa Ollaa isaa wajjiin waan qabuuf bara tti lolli yerrof dhabbate.
Sichiin Oromoo Baale keessatti godhames sochii polotikaa bartoota Oromootiin hordofame. Dhalachuun Adda Bilisummaa Oromoo qotota miliyoona baayyeetti lakkaawaman sochoosuudhaan akka isaan sirna bututaa san rukutan godhe. Kanaafuu, sochiin uummata Oromoo gara fuula duraatti tarkaanfatee, jabiinyi warraaqsichaa harka dhibba akka cimu gochuuf dhaabni jaarmiya cimaa qabu nu barbaachisa.
Qabsoon diinota ummataa irratti godhamu qajeelchee gaggeessuuf warraaqaan tokko diina dhugaa fi fira dhugaa gargar baasee beekuu isa barbaachisa. Seenaan asiin olitti hubatamee fi qorannoon haala yeroo ammaa hawaasaa keenya akka kanatti addaan foone beekuu nu dandessisuu qaba. Kanaaf, gitni fiyudaalii Oromoo dhaabbta sirna kana gara galchuuf kutatee dura dhaabbachuuf diinoota waliif tumsan keessa tokko.
Goobanoot haaraya jechuun Oromoota of ijaaruuf amantii of itti hin qabne. Imperiyalismiin biyya lafaa dura aantii diina ummata Oromooti. Wal qunnamtiin Imperiyalismii biyya lafaa fi koloniyalismii fi sirma booddeetti harkiftuu Tophiyaa kan jalqabame yeroo Imperiyalistoonni Afrikaa addaan qooddachaa turan. Egaa, seenaa wal- qunnama Imperiyalismii fi loloniyaalismii Toophiyaa jidduu jiruu fi koloniyalismiin Toophiyaa illee Imperiyaalismii kana irratti waan irkatuuf isaan lachuu diinota warraaqsichi rukutuuf akeekkatu.
Hojjetooni fi Qotataan irree warraaqsichaati. Gitni kun utubaa waldhaansichaa, Idiyolojiin isaa idiyolojii gita hojjatta falaasafa warraaqsichaati.
Saba kana keessaa garri caalaan qottoota. Warraaqsa Dimodraasii Baattii Guraandhalaa, kan sarbame. Dureeyyii xixiqqoo jechuun naggaadota fi hojjataa mootummatti, warra sadarkaa jalaa irra jiran.
Oromoon akkuma saba gara biraa gita adda addaa keessaa biyya jaallattoota bilisummaa saba isaaniitiif dhimma mataa isaanii lakkisan qaba. Barattoonii warraaqtuun isaa sadoo jireenya isaanii irraa bilisummaa saba isaanii filatani. Kanaafuu, gaafa dhaabni Bilisummaa saba isaaniitiif kutate jiraachuu baratan warraaqsichaati ni makamu. A- Akeeka Siyaasa Hundeen akeeka qabsoo kanaa sabni Oromoo Hiree isaa ofiin muratee ummanni oromoo [ deleted ] fi saamanuu bifa hundaa jalaa akka bilisoomuu gochuu dha.
Keessattuu, sagantaa fi galiin siyaasaa qabsoo kanaatis as itti aana. Murtii immaamataa fi sadarkaa hundumaatti filmaata mootummaa kan godhan koroota ummataa aangoo guutuu ganfachiisuu. Akeeka Diinagdee 1.Akkuma gosooti afoolaa hedduun jiranu faayidaaleen isaaniis hedduudha. Kana jechuunis tokkoon tokkoon gosa afoolaa faayidaalee ofii qabu jechuudha. Kun ammoo faayidaa tokkoof oolan jechuudha. Oduuwwan ykn sheekkowwan madda waantotaa ibsuudhaaf yaalanu kaayyoo isaaniitiif bifa seera qabeessa uumuu yaalu.
Faallaan uumaa creater kanaa karaa tokkoon yoo jiraatu, deeggartoonni isaa ammoo karaa biraatiin nijiraatu. Yoo kan godhu hanga tokko naannoo isaa sirna qabsiisa; sammuun isaas hanga tokko boqonnaa argata.
Hundeen dalagaalee hawaasaa kun akka cimu ykn gad- dhaabbatu godhus afooladha. Osoo balaan tokkollee irra hingahiin yeroo afoolatti fayyadamu waan barbaade sana arga ykn dhagaha jechuudha. Dhiibbaa abbootiin aangoo sababa adda addaatiin irraan gahanu, kan fuulaan mormuu hindandeenye afoolatti fayyadamee morma ykn ibsa.
or gorsa afurtam kan ittiin mana sirreessan
Raawwilee hawaasa biratti fudhatama qabanuufi jibamanu adda baafachuun akka qajeelfamaatti akka itti fayyadamanu nitaasisu. Kaayyoon afoolaa sabni tokko haala inni itti jiraatu barsiisuuudhaan miseensi hawaasaa kamiyyuu akka hordofu gochuudha. Haalli itti dhiyaatani garuu garaa garummaa qaba. Kanneen keessaa tokko namfakkiiwwan afoola keessatti argaman keessaa kanneen jireenya haala hawaasaa irraa maqanitti kofalchiisuu, itti baacuu, fi ciguun tooflaalee yeroo baayee hojiirra oolanidha.
Kanneen aadaa hawaasaa kabajanii jiraataiin immoo nijaju; nidinqisiifatu. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Please select a letter from the index above to see entries. Design by: Qubee Technologies oroict. Monday, October 12, Maxxansa Haaraa. Irreecha: Sirna Irreechaa namoota jaha irraa hanga miiliyoonota hedduutti. Oromoo Afoola Oromoo Barnoota. Hamma Dubbifame: 1, Maaloo yaada kee barreessi.
Maqaa keessan galchaa. Ergaa dogoggoraa galchite. Nu Hordofaa. Maxxansaalee haaraa. Kuusaa Jechootaa Afaan Oromoo. Afaan Oromo Online March 6, December 13, Seenaa Gabaabaafi Kitaabota Gaaz. Jechoota Hayyoota Addunyaa November 4, Oromiyaan aadaa hedduu qaba. Oromoon nyaata heedduu qaba. Jalqaba nyaata ykn dhangaa kanan tarreessa. Cuukkoo, fi caccabsaan garbuu ykn qamadii irraa hojjetamu. Sana booda ni daaku. Erga daakanii booda dhadhaadhaan sukkuumu.
Soogiddi illee caccabsaatti baayyinaan dabalama. Nyaata gabbinaa Proteins : warri kun foon, lukkuu,hanqaabuu buphaaqurxummii, haannan, itittuu, baaqilaa, akurii atarii, fi kan biroo irraa argamu.
Kuduraafi Fudura Fruits and Vegetables : Kana jalatti kan ramadaman warra akka:. Maangoo, muuzii, loomii,burtukaana, mandariina, abukaadoo, paayin appilii, paappayyaa, appilii fi kkf. Qaaraa ykn mimmixi illee as keessatti ramadama.
Oromoon guyyaatti akka aadaatti yeroo sadii nyaata. Kunis ciree, laaqana, fi irbaata taha. As keessaa muraasa maqaa dhahuun yaala: uffata dhalaa: qamisii, gurdii, marxoo,marata, faaya, naxalaa,kophee fi kan biroo hedduun jiru. Hub: gara fuulduraatti qorannee barreessina. Faayi warra akka warqee harkaa, mormaa, gurraa,fi hanbaarrii, hanbaarrii ka biroo, faaya mataa, fi faayyi mormaa hedduun ni jiru. Uffata Dhiiraa: qumxaa, kittaa, kofoo, bolaalee ykn surree,kootii, marxoo, surrii, naxalaa, fooxaa, faaya, fi kkf.
Hub: gara fuul duraatti ballinaan ibsama. Oromoon mana muka, dhagaa, sibiila, qorqorroo, citaa, simminttoo, dhoqqee fi kkf irraa hojjechuun keessa jiraata.
Dinagdeen haala manneetii Oromoon keessa jiraatanii haalaan murteessee jira. Kun gara fuulduraatti yeroo mootummaan Oromoo dhugaa tokko dhaabbatu haalaan irratti hojjechuu kan feesisu keessaa isa tokkoo dha. Amma garuu umurii 18 olitti irra guddaa dargaggoo fuudhaa fi heerumaa jiru. Maatiin gurbaan mariyachuun eega barbaadani, qomoo qoratanii, murtteessu. Gurbaan erga itti amanee jaarroleen mariyatanii, jaarsa ergatu. Jaarsis beellamma gaafatee warra maatii kadhata.
Yeroo kana warri hintalaa yoo itti amanan beellama laatu. Gara walakkeessaatti gurbaan ni naqata, kun jechuu hintalaaf warqee fi uffata erga jechuu dha. Egaa fuudha malee maaltu haferee! Lakkii, yeroo birraan dhufu ykn ayyaanni gurguddaan dhufu maratti dibicha ,raada ykn gaala erguu qaba gurbaan.
Qabeenya kana funaanuuf jecha warri hin talaa lafarra butu. Intalli manatti hafte ykn nama itti heerumuu barbaadde waan duudhaa fi aadaa guuttattee mana warra gurbaa dhaquudha.
Butiin fedhii fi beekumsa intalaa malee humnaan fuudhuudha, kuni amma waan seeran dhoowwameef hafaa dhufeera. Irreechi yeroo Oromoon laga, horaa fi gaaratti irreeffatee Waaqa galateeffatuu dha.
Oromoon irreecha yeroo lama ayyaaneffata. Bakki akka biyyaatti ballinaan beekamu Hora Arsadiiti. Tags aadaa aadaa oromoo afaan afaan oromoo seenaa. Your email address will not be published.
Aadaa Oromoo bilisummaa March 21, Leave a comment.Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. Disclaimer: All views expressed on this site are opinion of authors and ayyaantuu is not responsible for the content. Sign in. Log into your account. Password recovery. Afaan Oromoo. Moomummaan Cehumsaa Oromiyaa Maaliif Barbaachisa? Admin - October 10, 0.
Falmataa - October 9, 0. Falmataa - September 28, 0. Haala yeroo irratti marii Prof. Asaffaa Jaalataa fi Prof.
Chinese text to speech meme
Asfaw Bayyanaa Admin - August 9, 0. Hassan shatters European 10,m record with Admin - October 8, 1. Our family is saddened by the passing away of a great person, Legesse Tessema Admin - October 7, 0.
Our family is saddened by the passing away of a great person, Legesse Tessema We have lost one of the most impactful pillars on October Abiy Ahmed Abyot Kahsay? Cultural and political lies have always been Qeerroo: A regimented organization or a spontaneous movement? Admin - August 28, 0.
Family new wal katha
Response to Mr. Sirna gabrummaa diiganii biyya ammayyee fi sirna mootummaa seeraa fi heeraan namoota hundaaf lammummaa fi walqixxummaa raggaasu gad-dhaabuu hin dandeenye. Kun, impaayerri Habashaa diigamuu malee supphamuu akka hin dandeenye nuuf mirkaneessa. Walumaagala, Oromummaa dhabamsiisuuf karoora gabroomfataa haaromsatee ilmaan Oromoo qaroo tahan adamsee lafa irraa fixuun daguuggaa sanyii raawwataa jira.
Sanyii duguggaa alkalattii Cultural Genocide — afaan fi aadaa Oromoo dhabamsiisuu fi seenaa haquu — gaggeessaa jira. Kana cinatti, sab-qunnamtiin mootummaa fi kan kaffaltiin inni hojjechiisu marti lucceffatanii ummata Oromoo akka bulguutti dhiheessaa jiraachuun, akeeka sanyii daguuggaa kan ittiin jalqaban tahuun hubatamuu qaba. Sanyii daguuggaa ummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana sagalee cimaan balaaleffanna. Beektoti fi hayyooti Oromoo, ummata keenya yakka kana irraa baraaruuf tokko taanee waliin hiriiruun, gaafatama seenaa fi dirqama lammummaa nurra jiru dha, jedhna.
Gaaffii haqaa ummatni tokko bilisummaan, dimokraasiin, walqixxummaan fi tasgabiin akka mirkanaawuuf gaafatu silaa imaammata siyaasaa fi bulchiinsa mootummaa biyya sanaa tahee ittiin hojjetama. Garuu impaayerri Itoophiyaa daangaa hardha qabdu kanaan erga addunyaa irratti beekamtee waggoota dabran keessatti mootummoota gosa adda addaa afur keessummessitus, gaaffii haqaa Oromoon gaafatu kan deebisu hin argamne.
Caalaayyuu, gaaffiin Saba Oromoo, mootummotaa Itoophiyaa dhufanii darbaniin akka diiggaa biyyaatti fi akka farra tokkummaatti fudhatamee, duullii qaamaa fi qalbii fufinsaan irratti gaggeeffamaa jira.
Spring data projection
Vivo global theme download
Diagram based trailer wiring diagram for 1999 ford f250
Wall vk am
Chennai silks family tree
Modi ji ka number chahiye
Man maguwoharjo 2014
Mame hiscore plugin
Replies to “Beekumsa hadiisota adda addaa pdf”
I processi di formazione, la crescita e la
Vindictus npcs gmod
Yogore on Beekumsa hadiisota adda addaa pdf